Ngo "Expobel" (Minsk) yezitolo
Sanquma ukuthenga izipho umkhaya nabangane? Ufuna ukuthenga izesekeli ezishibhile bese musa ukugijima komunye Sekutsenga komunye? Khona-ke kufanele ushayele ku "Expobel" (Minsk), okubandakanya inombolo enkulu izitolo nge intengo iphuzu ezikhangayo.
The main shopping centre of "Expobel" (Minsk)
Market "Expobel" e Minsk itholakala ezingomakhelwane Green Meadow. Isebenza kusukela ngo-2007 futhi namuhla ine indawo engaphezu kuka-40 000 m 2. Lapha, wonke umuntu angakwazi hhayi kuphela ukuthenga izimpahla ezidingekayo, kodwa futhi ukuzijabulisa, ngoba ekwakheni bowling umhubhe, cinema, izindawo zokudla, izikhungo ukuzijabulisa zezingane ngisho ekhasino.
Uma ufuna bahlobise ukubukeka kwakho, futhi kulokhu, maphakathi yezitolo "Expobel" (Minsk), kukhona izinhlelo ezidingekayo. Yebo, yebo, ngoba kukhona nokucwala ubuhle, izinwele salon, ukushuka studio nabanye. ochwepheshe kuphela abazi umsebenzi enhlanganweni ngayinye, befuna labo abangase babe abathengi. Lezi zintokazi ayesesifundeni gumbi we yezitolo, basutha nge abakushoyo imibono yabo abaningi abanokwazisa.
"Expobel" e Minsk uyonika ukuvela okuningi
ukuphila isigqi lanamuhla maduze ngokwanele. Abazali njalo ukusebenzela ikusasa lezingane zabo, kodwa isikhathi ngezinye izikhathi akwanele. Akunandaba, ngoba manje kukhona yezitolo "Expobel", lapho ungaya nomndeni wakho ukuthenga, bese bulisa adle endaweni kanokusho yokudlela engabizi.
Kanjani ukuze uthole ezitolo?
Ngo "Expobel" (Minsk) anqume ukuya esikhungweni abathengi eziningi. Lokhu akusona isimanga, ngoba yezitolo iyona eshibhe. Kodwa lapha ungafika kanjani kule ndawo enhle, mina angazi konke. Ngakho ukufunda nokubhala.
izakhamizi lucky Ikakhulu valerian, Drozdovo futhi imizana eseduze nabo. Abakwazi ukuthola e "Expobel" (Minsk) ku imoto. Mayelana lapho ungakwazi ushiye imoto, waya mall, ungakwazi ungakhathazeki, ngoba kukhona kukhona yokupaka, okuhlanganisa izihlalo 3500.
Uma unquma singene "Expobel" (Minsk) ngaphansi kwamandla ayo, kubalulekile ukuthola metro station "Moskovskaya" bese uthatha ibhasi 113 noma Shuttle kusukela Sukharevo ngaphansi inombolo 1191. Uma esitobhini kwesokudla, kokushiya ezokuthutha, uzobona uphawu olunegama shopping centre, kukhona ngaphansi okuyinto nezitebele zamahhashi eziningi ezihlukahlukene kwezimpahla. Ngaphesheya komgwaqo kuyinto inkundla ezimboziwe "Expobel". Nazi emakethe ukudla nokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi.
Futhi khumbula, kokunquma ukuya "Expobel" (Minsk), uzothola ngokwakho endaweni esikhulu, hhayi nje yezitolo, kodwa futhi ukwazi nijabula
Isikhumba jacket futhi lesikhumba isiketi. Fashions lesikhumba iziketi. jackets Female kusuka lesikhumba yemvelo
Long ingubo: kanjani futhi yini okufanele uyigqoke?
Ukudalula amanani. "Inkemba esika nhlangothi zombili": yini le ndlela yokukhuluma